Ralf Ragnick Oo Hogaamin Doona Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Champions League – Banaadirsom - BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Ralf Ragnick Oo Hogaamin Doona Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Champions League –...
Ralf Ragnick Oo Hogaamin Doona Kulankiisii Ugu Horeeyay Ee Champions League – Banaadirsom
Kooxda Man United ayaa marti galinaysa kooxda Young Boys kulan ka tirsan wareega Group-yada champions league kulan ka dhici doona Old Trafford.
Man United ayaa xaqiiqsatay booskooda wareega 16-ka laakiin waxa ay wali u dagaalamaysaa kaalinta 1-aad ee wareegeeda maadama ayna wali xaqiiqsan kaalinta 1-aad.
Dhanka kale Young Boys ayaa isha ku haysa in ay mar kale garaacdo Man United kadib markii ay kulankii hore kaga soo badisay garoonkeeda.
Kulanka: Man United Vs Young Boys
Kulankan ayaa noqon doona kulankii 4-aad ee ay kooxaha Man United iyo Young Boys ku kulmaan champions League, Red Devils ayaa badisay 2-dii kulan ee hore ka hor inta ayna guuldaro 2/1 ah kala kulmin bilowgii xilli ciyaareedkan.
Kooxaha reer Switzerland ayaa kaliya badisay 2 kulan 27-kii kulan ee ay la ciyaareen kooxaha reer England iyada oo ay labada kooxood ee ka badiyay tahay kooxda Basel oo garaacday kooxaha Man City iyo Chelsea.
Tan markii laga badiyay kulankii ugu horeeyay ee Young Boys ee wareega Group-yada, Man United ayaan laga badin 4-tii kulan ee wareega Group-yada champions League iyaga gaadhay 3 guul iyo hal bar-baro.
Young Boys ayaa laga badiyay 6-dii kulan ee ugu dambeeyay ee ay martida ahayd tartamada yurub iyaga oo markii ugu dambaysay ee ay badiyeen ahayd sanadkii 1960.
Man United ayaa ku badisay goolal ay dhalisay 15-ka daqiiqo ee ugu dambeeyay ciyaarta champions League 3 kulan oo ay ciyaartay waana kooxdii ugu badnayd ee sidaas samaysa tartanka xilli ciyaareedkan.